> Household wear>1 drawer, 1 door kitchen cabinet
Kitchen cabinet Stainless top with 1 drawer, 1 door and 1 shelf. စတီးအခင်းပြားနှင့် အံဆွဲတစ်ခု၊ တံခါးတစ်ချပ်နှင့် စင်တစ်စင်ပါဝင်သည့် မီးဖိုခန်းသုံးဗီရို Size: W50*D60*H90 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၅၀၊ အနံ ၆၀၊ အမြင့် ၉၀ စင်တီမီတာ